मृत्युपछि शवदान अनि केको दाह संस्कार ?
रत्न संसार श्रेष्ठ, जलस्रोत विज्ञ । उनले स्पष्ट शव्दमा सबैले सुन्ने, देख्नेगरी भनेका छन्– शास्त्रकै कुरा गरेर बस्ने हो भने यसमा आँखा वा अङ्ग दान गर्न हुन्छ भनेको छैन ।
यस अकिंचनले त आँखा र अङ्गहरु
(मुगौलाहरु, कलेजो, मुटु र फोक्सो, प्यान्क्रियाज र सानो आन्द्रा) दान गरिसकेको छ । शेषपछि शव नै दान गरे पछि दाहसंस्कार गर्ने कुरै उठ्दैन । मरेपछि पनि कसैको उद्धार गर्न सफल हुनु राम्रो हो । देशको खाँचो रत्न संसार श्रेष्ठले गरेजस्तो त्यागको छ ।
जीवनभर लुट्ने, मरेपछि लाशलाई समेत दान गर्न नसक्ने कति छन् कति ? हुन त लुटेको पैसा साथै जाने होइन । पदमा, प्रतिष्ठामा बसेकाहरु गर्न हुने नहुनेमात्र होइन, मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराध गरेर पनि पदमा पुग्नेहरु छन् र तिनीहरु नै सधैं बाँचिरहन्छु भन्ने गलत सोचको सिकार बनेका देखिन्छन् ।
जीवन के हो ? जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ ? यत्ति कुरा पनि हाम्रो शिक्षाले सिकाउन सकेको देखिदैन । जसरी पनि पदमा पुग्ने र पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा समाजमा व्यापक बिश्रृङ्खलता बढेर गएको छ । समाज समाजजस्तो देखिन छाढेको छ । समाजमा विवेकहीनहरुको रजगज झन झन बढेर जाँदो छ ।
मुख्यतः राजनीतिले मानवतालाई बिर्सदै गएको छ । मूल प्रदूषित भएपछि बहाव पवित्र हुनसक्दैन । सबै नीतिको प्रमुख राजनीतिमा यति धेरै दुर्गुणहरु भरिएका छन् कि असामाजिक भाइरस सलबलाइरहेको देखिन्छ । यहीकारण प्रशासन भ्रष्ट छ ।
अव बेला भयो, रत्न संसार श्रेष्ठले जसरी शेषपछिको शव समाजसेवामा लगाएर केही त गरें भनेर आत्मसन्तुष्टि लिने र समाजलाई परिवर्तनको थालनी गर्ने ।